‘पैदल यात्रुलाई जोगाउन २०० जरिवाना’
अन्तर्वार्ता/विचारसोमवार, जेठ २२, २०७४
डीआईजी मिङमार लामा
जेब्रा क्रसिङ र सडक पेटीबाट नहिंडेका यात्रुमाथि १६ जेठदेखि धमाधम कारबाही थालेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख डीआईजी मिङमार लामा भन्छन्, “पैदल यात्रुलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउन यो अभियान थालिएको हो ।”
जेब्रा क्रसिङबाट बाटो नकाटेको भन्दै पैदल यात्रुलाई रु.२०० जरिवाना तिराइरहनुभएको छ । अहिलेसम्म कति राजस्व उठ्यो ?
१० हजार ८६१ पैदल यात्रु कारबाहीमा परिसके । त्यसमध्ये ४ हजार २४३ जना ट्राफिक प्रहरीको सचेतना कक्षामा सहभागी भए भने ६ हजार ६१८ जनाबाट रु.१३ लाख २३ हजार ६०० जरिवाना संकलन भएको छ ।
सबै ठाउँमा न जेब्रा क्रसिङ छ, न फूटपाथ । भएका कतिपय ठाउँमा पनि सद्दे छैनन् । यस्तो बेला अभियान सञ्चालन गर्नुको नियत प्रष्ट भएन नि !
भएको जेब्रा क्रसिङ, आकाशे पुल वा सडकपेटी प्रयोग गर्ने संस्कारको पनि अभाव छ । आकाशे पुलमुनिबाट एअरफोन लगाई गीत सुन्दै, मोबाइलमा कुरा गर्दै बाटो काट्ने गलत अभ्यासलाई पनि सामान्य मान्न थालिएको छ ।
तपाईंले भने जस्तो आकाशे पुल, सडकपेटी र जेब्रा क्रसिङ नभएको ठाउँमा हामीले एक जनालाई पनि कारबाही गरेका छैनौं ।
अभियानबारे सचेतनामूलक प्रचारप्रसार नगरी सिधै कारबाही गर्दा यात्रुमाथि अन्याय भएन र ?
प्रत्येकको घरमा पुग्न सकिएन होला । तर १५ वैशाखदेखि उपत्यकाका २६ स्थानमा १५ सय कर्मचारी खटाएर सडक सुरक्षाबारे जानकारी दिएका छौं । यातायात व्यवसायी, नेपाल स्काउट, विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत पनि अभियानबारे जानकारी दिएका छौं ।
अस्पताल हिंडेका यात्रु र परीक्षा दिन जान लागेका विद्यार्थीलाई एकाएक जरिवाना तिराउँदा उनीहरूको अधिकारको ख्याल गर्नुपर्दैन ?
हामीले त सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन मात्रै गरेका हौं । ऐनमा रु.२०० देखि रु.१ हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सडक व्यवस्थापन गर्न नसकेको कमजोरी ढाकछोप गर्न ट्राफिक प्रहरीले पैदल यात्रुलाई निशाना बनायो भनिन्छ नि !
कसैको आलोचना वा प्रशंसा भन्दा पनि हाम्रा लागि यात्रुको ज्यान महत्वपूर्ण हो । गत वर्ष सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएकामध्ये ४२ प्रतिशत पैदल यात्रु थिए । त्यसैले यो अभियान पैदल यात्रुकै सुरक्षाका लागि शुरु गरिएको हो ।